Abavelisi kunye nabaThengisi beGlasi
Ukuma kweglasi okujikelezayo
Ukucocwa kweglasi yesigcawu
Iposi yesitayile engenazintsimbi
Nyama Isincedisi seGrisi
Ezinye iinxalenye zoomatshini
Inxalenye yePump Valve
Izixhobo zombane zombane-03
Izinto zokufakelwa kombane -2
Izixhobo zombane zombane-01
Ukuphoswa kwesinyithi yinkqubo yanamhlanje eneengcambu zakudala. Kwinkqubo yokuphosa i-iron, iimilo zensimbi zenziwa ngokuthulula i-iron etyibilikisiweyo kwikhonkco lobumba, apho ipholisa khona kwaye kamva ikhutshwe ekubunjweni. Ukuphoswa kwensimbi yeyona nto iphambili kunye nenkqubo yezona mveliso inamandla kwimbali. Sasisebenzisa ukwenza izinto ezininzi zesinyithi ezisetyenziswa kubomi bethu bemihla ngemihla: iinxalenye zeemoto, amavili oololiwe, izithuba zesibane, iziseko zebhasi zesikolo, nokunye okuninzi. Kwaye, isiseko sokuphoswa kwensimbi sixhomekeke ekusebenzisaneni kwakhona njengentsimbi njengemithombo yeendleko ezingasetyenziswayo, kunciphisa inkunkuma eyilahlekileyo enokuthi iphele ekubanjisweni komhlaba.
Indawo ye-LongJu yezoQoqo, isiXeko saseDongying, kwiPhondo leShandong, China
bhalisa ukuya kuPhando lwethu